ရက်ရက်စက်စက် လူသတ်ဗီဒီယိုဖိုင် ကိစ္စအေအေက ငြင်းပြီး တပ်မတော်လက်ချက်လို့ ပြန်စွပ်စွဲ
ရက်ရက်စက်စက် လူသတ်ဗီဒီယိုဖိုင် ကိစ္စအေအေက ငြင်းပြီ...
31 ต.ค. 2562 - 21:29 น.
ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တဖက်နဲ့တဖက် စွပ်စွဲနေကြတဲ့အပေါ် ဘီဘီစီက အေအေဘက်ကိုကော၊ တပ်မတော်ဘက်ကိုကော ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က ပြောနိုင်တဲ့အချက်တချက်က ခင်ဗျား ဒီ ဖေ့ဘွတ်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ဖေ့ဘွတ်မှာ ဒီလိုမျိုးရက်ရက်စက်စက်သတ်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးကို စစ်တပ်က လော်ဘီ မဟုတ်ပဲ နောက်တယောက်ကနေ တင်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲလိုတင်လို့ရှိရင် အခုချက်ချင်း ဖြုတ်ချခံရမယ်။ အခုချက်ချင်း အကောင့်အပိတ်ခံရမယ်၊။ အခုဟာ က အဲဒီက စစ်တပ်က လော်ဘီတွေ တင်တဲ့ဟာမို့လို့ ကြည့်လို့ တောက်လျှောက်ရနေတယ်(မှတ်ချက် - အဲဒီ ဗီဒီယိုဖိုင် နာရီအတော်ကြာ ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှိနေခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မရှိတော့ပါဘူး)၊ ဆိုတော့ ဒီဟာက စစ်တပ်ကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာ အတော်လေးထင်ရှားနေတယ်။
อัลบั้มภาพ ရက်ရက်စက်စက် လူသတ်ဗီဒီယိုဖိုင် ကိစ္စအေအေက ငြင်းပြီး တပ်မတော်လက်ချက်လို့ ပြန်စွပ်စွဲ